Su’aalaha ee ugu muhiimsan wareysiga shaqoraadinta(Interview-ga) | Laashin iyo Hal-abuur
Su’aalaha ee ugu muhiimsan wareysiga shaqoraadinta(Interview-ga)
Su’aalaha ee ugu muhiimsan wareysiga shaqoraadinta.
Walaalkeyga shaqo raadiska ahoow,qoraalkan gaaban waa mid ku saabsan habka iyo hannaanka ugu fudud, ee aad uga jawaabi karto, Su’aalaha shaqa bixiyahaaga.
Waxaan ku gula wadaagi doona oo aan ku soo bandhigi doonaa 5-ta su’aal ee ugu muhiimsan wareysiga iyo qaabka looga jawaabo:-
Marka aad qoraalkan aqrisato waxaad helaysaa aragti fog, oo ku aaddan sida looga jawaabo weydiimaha lagama maarmaanka ah, waxaadna ka badbaadi doontaa waayo aragnimo darro inta badan ku dhacda dadka, kuwaas oo kaa hor istaagi karo kuna waayi kartid in aad hesho shaqada aad jeceshahay.
Haddii lagu weydiiyo Naftaada maxaad iiga sheegi kartaa?
Marka aad maqasho weydiintan lagu weydiiyo ha u qaadan in ay tahay fursad aad uga sheekeyso noloshaada ama aad dib ugu aqriso meerta nololeedkagii oo dhan (CV).
Adiga oo hadalkaaga soo koobaaya ,qeex kaalinta hawleed aad ku firfircoon tahay aadna isleedahay waad ku xooggan tahay (strengths) sidoo kale ha ilaawin inaad sheegto qibradaada iyo heerka ay waxbarashadaadu gaarsiisan tahay , sidoo kale waxaa muhiim ah inaad sheegto waxyaalaha ugu muhiimsan ee aad soo xerogalin karto (accomplish), jawaabtaadu yeeysan qaadan waqti ka badan 60 il biriqsi (hal daqiiqo).
Majiirahaaga iyo hadafkaaga hawleed waa maxay ?
Inta badan dadka shaqada raadinaaya waxay ku dhacaan dabintaan oo waxay dusha ka aqriyaan dhammaan waxa ku qoran warqadihiisa shaqo iyo faahfaahintooda .
Waxa kaliya ee lagaa rabo marka aad su’aashaan ka jawaabeyso waa in aad sheegtaa meelaha aad ku xoogan tahay(Kartidaada shaqo) oo aad isleedahay waad kasban kartaa Shaqa bixiyaha ku wareysanaya . Jawaabta su’aashaan kama foga Su’aasha Koowaad.aad iskugu dhawyihin.
Maxaad kaga duwantahay tartamayaasha kale?
Jawaabtaadu waa inay noqotaa mid aad faahfaahin mug leh ka bixisid, waayo aragnimada iyo hawlkarnimadaada shaqo, sidoo kale waa inaad odorostaa, hawlgalada cusub iyo hannaanka shaqo ee aad la iman doonto, kaasoo aad is leedahay waa mid gelaya oo u dusaya dhegaha shaqa bixiyaha ku wareysanaya
Arrintan waxaa ka caawin kara inaad marka horre soo aqristo, Shirkada U Shaqo tegayso, da’deeda, inta goobood ay ku taallo, shaqada ay qabato, iyo meesha aad is leedahay meeshaas way ka xagal daacsantahay.
Tusaale ahaan waxaad dhihi kartaa”Waayo aragnimadeydu waa mid keeni karta guul ay shirkadu ku talaabsato, adigoo meel dhawr ah taabanaya, kagana hormarto shirkadaha kale, Tusaale shirkada aad u shaqo tegaysaa haddii ay tahay Shirkad dharka iibisa inaad tiraahdo waxaan awoodaa inaan shirkada ku soo xidho ganacsato cusub, ama haddii ay tahay shirkad wax iibisa inaad tiraahdo waxaan awoodaa inaan macaamiil cusub idiin keeno”.
Shaqadaadii hore maxaad uga tagtay?
Su’aashani waxay ka mid tahay kuwa ugu adage ee laga yaabo inaad la kullanto ama lagu weydiiyo, marka aad shaqo raadis tahay waxaad iska ilaalisaa inaad faallo xun ka bixiso maamulayaashaadii hore iyo sidoo kale shaqaalihii aad isla soo shaqeyseen, sida inaad tirhaado “waxaan shaqada uga tagay dabeecad xumada maamulaheygii hore, ama shaqaalihii hore aan isla soo shaqeynay waxay ahaayeen kuwo aad u xun”.
Hadii shaqadaadii hore laga soo buriyay/ceyriyay isku day inaad isku darto koox wada socotay oo shaqada ka tagay. tani waxay kaa taageeraysaa dhinaca sumcadaada inaadan ahayn mid gudbinaya, meelaha ay ka liitaan shirkadaadii hore iyo mida cusuba.
Wax ma iiga sheegi kartaa meelaha aad ka liidato ama aad taagta darran tahay?
Sababta su’aashan laguu weydiinaayo waa in lagaa helo, meel ana boog shaqadan inaad qabato kaa hor istaagi karto, waxaad iska ilaalisaa inaad sheegto caddeymo sababi kara kuu diidi karo inaad qabato shaqada aad wareysiga u galeyso. Tusaale: Haddaad dhahdo waa hurdo jeclahay, waxay keeni kartaa in lagu arko inaadan waqtiga ilaalineyn shaqada oo hurda kula tegi karto.
Balse waxaad dhihi kartaa “waxaan aad u jeclahay cunitaanka macmacaanka, markasta oo aan arko waxaan jeclahay in aan dalbado”.
Waxaad kaloo sheegi kartaa meel aad ku liidato laakiin aan wax xariir ah la laheyn shaqada aad wareysiga u galeyso Tusaale ahaan hadii aad wareysi u galeyso xisaabiye oo su’aashan lagu weydiiyo waxaad dhihi kartaa “Waxaan ahay ruux aad u beer jilicsan oo aad u calool xumooda marka uu arko dad dhibaateysan” ,ogsoonaaw arrinta liidashadaadu wax xariir ah lama lahan shaqada aad wareysiga u galeyso.
Su’aalaha kale ee lagu weydiin karo aad ayey u badan yihin waxaana ka mid noqon kara :
Wax ma iiga sheegi kartaa meelaha aad awoodda ku leedahay/ku xooggan tahay?
Booska ad isku soo sharraxday aqoon intee la eg ayaad u leedahay?
Waqtiga aad fasaxa tahay maxaad qabataa?
Shan sano ka dib halkeed rabtaa inaad joogto?
W/Q:Bashir Hashi Dhore